Fanantenan'ny rehetra - Fiangonan'Andriamanitra manerana izao tontolo izao Soisa
Mametraka fanontaniana manan-danja aminao aho: Ahoana ny hevitrao momba ny tsy mpino? Mino aho fa izany no fanontaniana tokony hofantarintsika rehetra! Chuck Colson, mpanorina ny Prison Fellowship sy ny programa Radio Breakpoint any Etazonia, dia namaly an'io fanontaniana io tamin'ny alàlan'ny fitoviana: Raha misy jamba mandia tongotrao na manidina kafe mafana amin'ny lobakao, tezitra aminao ve ianao? Mamaly ny tenany izy fa angamba tsy tokony ho izany isika, ...
Na dia iray aza amin'ireo ankafiziko indrindra ny famelan-kelok'Andriamanitra, dia tsy maintsy miaiky aho fa sarotra ny mamantatra ny tena maha izy azy. Hatrany am-boalohany dia nokendren'Andriamanitra ho fanomezana malala-tanana izany, fihetsika lafo famelana heloka sy fampihavanana nataon'ny zanany lahy, izay faratampony no nahafatesany teo amin'ny hazo fijaliana. Vokatr'izany, tsy vitan'ny hoe navotsotra ihany isika, haverina - "nampidirina" niaraka tamin'ny fitiavana ...
Isaky ny toeran'ny adi-hevitra momba ny finoana dia manontany tena aho hoe maninona no toa ny mpino no mahatsapa fa misy tsy fatiantoka. Toa ireo mpino dia toa nilaza fa nahazo porofo ny atheista raha tsy hoe ny mpino dia nahomby tamin'ny fandavany azy ireo. Ny tena marina dia tsy afaka manaporofo fa tsy misy Andriamanitra. Satria tsy mino ny mpino tsy mino an'Andriamanitra ny fisian'Andriamanitra ...
Betsaka ny Kristiana tsy dia tena mahazo antoka sy manahy momba izany, nefa mbola tia azy ireo ve Andriamanitra? Miahiahy izy ireo fa mety handà azy ireo Andriamanitra, ary mbola ratsy kokoa aza fa nolavin'izy ireo. Angamba ianao mitovy tahotra. Araka ny hevitrao, no manahy ny Kristianina? Ny valiny dia tsotra fotsiny fa izy ireo no niaraka tamin'ny tenany. Fantatr'izy ireo fa mpanota. Tsapan'izy ireo ny tsy fahombiazany, ny fahadisoany, ny ...
Mametraka fanontaniana vitsivitsy ho antsika rehetra izay manana zanaka izahay. "Moa ve ny zanakao tsy nankatò anao?" Raha namaly ny eny ianao, toy ny ray aman-dreny hafa rehetra, dia tonga amin'ny fanontaniana faharoa isika: "Efa nanasazy ny zanakao ve ianao noho ny tsy fankatoavana?" Hafiriana no naharetan'ilay famaizana? Mba hamaritana azy bebe kokoa: "Nohazavaininao tamin'ny zanakao ve fa tsy hifarana ny sazy?" Toa manelingelina izany, sa tsy izany? Isika izay malemy ary ...
Any amin'ny tontolo andrefana, ny Krismasy dia fotoana iray izay ahodian'ny maro amin'ny fanomezana sy fanomezana. Ny fisafidianana fanomezana ho an'ny olon-tiana matetika no olana. Ny ankamaroan'ny olona dia mankafy fanomezana manokana sy manokana izay nofidina tamim-pitandremana sy tamim-pitiavana na noforonin'ny tena. Toy izany koa, Andriamanitra tsy manomana ny fanomezana namboarina ho an'ny zanak'olombelona amin'ny minitra farany ...
Imbetsaka i Paoly no niady hevitra tamin'ny Romana fa tokony amin'i Kristy isika fa Andriamanitra dia mihevitra antsika ho marina. Na dia manota aza isika indraindray, ireo fahotana ireo dia isaina amin'ny toetra taloha niaraka nohomboana tamin'i Kristy. Ny fahotantsika dia tsy miankina amin'ny toetrantsika ao amin'i Kristy. Adidintsika ny miady amin'ny ota mba tsy ho voavonjy fa satria efa zanak'Andriamanitra isika. Ao amin'ny tapany farany amin'ny Toko 8 ...
Samy manana ny hitsiny sy ny tsy mety ny tsirairay, ary ny olona rehetra dia efa nanao ny tsy mety - na dia samy araka ny heviny ihany. "Ny diso dia olombelona," hoy ny filazan'ny olona malaza. Ny olona rehetra dia samy nandiso fanantenana namana iray, nandika toky, nanimba ny fihetseham-pon'ny olon-kafa. Fantatry ny rehetra ny fanamelohana. Noho izany, ny olona dia tsy te hanan-javatra momba an'Andriamanitra. Tsy mila andro fitsarana izy ireo satria fantany fa tsy madio ...
Nanoratra toy izao i Paoly ao amin’ny Romana: “Ry rahalahy sy anabavy malala, ny iriko amin’ny Isiraelita amin’ny foko rehetra sy ny angatahiko amin’Andriamanitra dia ny hamonjena azy.” ( Rôm. 10,1 NGÜ). Nisy zava-nanahirana anefa: “Fa tsy ory amin’ny zotom-po ho an’Andriamanitra izy; Afaka mijoro ho vavolombelona momba izany aho. Ny tsy ampy dia ny fahalalana marina. Tsy fantatr’izy ireo ny momba ny fahamarinan’Andriamanitra ary miezaka ny hijoro eo anatrehan’Andriamanitra amin’ny alalan’ny fahamarinany izy ireo.
Ao amin’ny Filazantsaran’i Lioka isika dia mahita tantara iray izay niresahan’i Jesosy ny amin’ny hoe manao ahoana ny olona iray mitady fatratra ny zavatra very. Izao no tantaran’ilay farantsa very: “Na eritrereto hoe nisy vehivavy nanana drakma folo ka very iray.” Vola grika ny drakma izay mitovitovy amin’ny sandan’ny denaria romanina na roapolo francs eo ho eo. « Moa tsy hampirehitra jiro va izy ka hanodina ny trano manontolo mandra-pahatongan’ny...
Inona no dikan'ny hoe mpanara-dia an'i Jesosy? Inona no dikan'ny hoe mizara amin'ny fiainana navotana nomen'Andriamanitra antsika amin'i Jesosy amin'ny alàlan'ny Fanahy Masina? Midika izany fa mitondra fiainana tena kristiana marina amin'ny alàlan'ny ohatra omentsika, ny fanompoana tsy an-tsitrapo ny mpiara-belona amintsika. Mbola lavitra kokoa ny apostoly Paoly: «Tsy fantatrao va fa ny vatanao dia tempolin'ny Fanahy Masina izay ao anatinao ary avy amin'Andriamanitra ianao, ary tsy misy ...
Fa maninona aho no velona Misy dikany ve ny fiainako? Inona no mitranga amiko rehefa maty aho? Fanontaniana tany am-boalohany izay mety ho nanontanian'ny tsirairay ny tenany teo aloha. Fanontaniana izay mamaly anao eto dia valiny tokony haseho: Eny, misy dikany ny fiainana; eny, misy fiainana aorian'ny fahafatesana. Tsy misy zavatra azo antoka afa-tsy ny fahafatesana. Indray andro dia mahazo vaovao mahatsiravina isika fa misy olon-tiana iray maty. Tampoka teo dia mampatsiahy fa tokony maty koa isika ...
Matetika no manampy ny mijery akaiky ny andinin-teny. Nanao fanambarana manaitra sy mahafaoka ny zavatra rehetra i Jesosy, nandritra ny resaka nifanaovana tamin’i Nikodemosy, manam-pahaizana ambony sady mpanapaka ny Jiosy. “Fa toy izao no nitiavan’Andriamanitra izao tontolo izao: nomeny ny Zanani-lahy Tokana, mba tsy ho very izay rehetra mino Azy, fa hanana fiainana mandrakizay” (Jao. 3,16). Jesosy sy Nikodemosy dia nihaona tamin'ny toerana mitovy - avy amin'ny mpampianatra ...
Raha ny fahitana ny olombelona dia matetika no tsy mahazo an'izao tontolo izao ny heriny sy ny sitrapony. Matetika loatra ny olona dia mampiasa ny heriny hifehezana ary mametraka ny sitrapony amin'ny hafa. Ho an'ny zanak'olombelona rehetra, ny herin'ny hazofijaliana dia hevitra hafahafa sy hadalana. Ny fihevitry ny fahefana laika dia mety hisy fiatraikany lehibe amin'ny Kristiana ary hiteraka fandikana diso ny soratra masina sy ny hafatry ny filazantsara. "Tsara izany…
Misy ohabolana manao hoe: “Ny fanantenana dia maty farany!” Raha marina io teny io, dia ny fahafatesana no fiafaran’ny fanantenana. Tao amin’ny toriteny tamin’ny Pentekosta, dia nanambara i Petera fa tsy afaka nihazona an’i Jesosy intsony ny fahafatesana: “Andriamanitra nanangana Azy sy nanafaka Azy tamin’ny fanaintainan’ny fahafatesana, satria tsy hainy hohazonina ny fahafatesana.” ( Asa. 2,24). Nanazava i Paoly tatỳ aoriana fa ny Kristianina, araka ny asehon’ny fanoharana momba ny batisa, dia tsy ...
Raha afaka misafidy andinin-tsoratra masina iray izay mamintina ny fiainanao kristiana iray manontolo ianao, iza izany? Ity angamba ilay andinin-teny izay notsongaina indrindra: "Toy izao no nitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao: nomeny ny Zanany lahitokana, mba tsy ho very izay rehetra mino azy, fa hanana fiainana mandrakizay?" (Jn 3:16). Safidy tsara! Ho ahy dia ity andininy manaraka ity no zava-dehibe indrindra izay tsy azon'ny Baiboly atao hoe: "Amin'izany andro izany dia (...)
Ny tanin’ny Gerasena dia teo amin’ny morony atsinanan’ny Ranomasin’i Galilia. Rehefa nidina avy tao an-tsambokely i Jesosy, dia nifanena tamin’ny lehilahy iray izay niharihary fa tsy nifehy tena. Nipetraka teo anelanelan’ny lava-bato fasana sy fasan’ny fasana izy. Tsy nisy olona afaka nanalana azy. Tsy nisy olona natanjaka hiatrika azy. Nirenireny andro aman'alina izy, nikiakiaka mafy sady nitora-bato ny tenany. “Fa nony nahatazana an’i Jesosy teny lavitra eny izy, dia nihazakazaka ka niankohoka teo anatrehany…
Matetika ny resaka hahafantarana an'i Jesosy. Ny fomba hanaovana izany anefa toa somary malalaka sy sarotra ihany. Natao indrindra izany satria tsy afaka mahita azy isika na miresaka mifanatrika. Tena misy izy io. Nefa tsy hita na tsy azo zahana io. Tsy afaka mandre ny feony koa isika, afa-tsy angamba amin'ny tranga tsy fahita firy. Ahoana ary ny fomba hahalalantsika azy? Tato ho ato mihoatra ny iray ...
Fantatrao ve fa kristiana maro no miaina isan'andro ary tsy tena mahazo antoka fa mbola tia azy ireo Andriamanitra? Miahiahy izy ireo fa mety handà azy ireo Andriamanitra, ary mbola ratsy kokoa aza fa nolavin'izy ireo. Angamba ianao mitovy tahotra. Araka ny hevitrao, no manahy ny Kristianina? Ny valiny dia tsotra fotsiny fa izy ireo no niaraka tamin'ny tenany. Fantatr'izy ireo fa mpanota. Fantatry ny tsy fahombiazany, ny ...